WARBIXIN: Kadib In Zinedine Zidane Uu Gaadhay Guushiisii 100-Aad Ee Waayihiisa Tababaranimo Ee Real Madrid, Macalinka Ree France Oo Mourinho Iyo Ragg Badan Ka Sare Maray. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Kadib In Zinedine Zidane Uu Gaadhay Guushiisii 100-Aad Ee Waayihiisa Tababaranimo Ee Real Madrid, Macalinka Ree France Oo Mourinho Iyo Ragg Badan Ka Sare Maray.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa kulankii Malaga ku gaadhay rekoodh aad u fiican kaas oo noqday guushiisii 100 aad ee waayihiisa tababaranimo ee Los Blancos oo ah dhamaan tartamada oo dhan. Zinedine Zidane ayaa heer guulaysi aad u sareeya loo diwaan galiyay isaga oo qayb ka noqday rekoodhka tababarayaashii ugu fiicnaa kooxdiisa Madrid.
Macalinka ree France ayaa daawanayay kooxdiisa Real Madrid oo 2-0 ku garaacday kooxda Malaga waxayna guushani ahayd mid dib loogu xusuustay wax qabadkii Zizou iyo qaabkii cajiibka ahaa ee uu Santiago Bernabeu muddadii uu maamulayay aduunka ugaga soo yaabsatay. Zidane ayaa Mourinho kala wareegay macalinkii Madrid ugu heerka guulaha fiicnaa.
Zinedine Zidane ayaa Real Madrid soo maamulay 99 kulan oo hoyraalka La Liga ah iyada oo kulanka soo socdaa noqon doono kulankiisii 100 aad ee horyaalka Spain laakiin 66 kulan ayuu Zidane ka soo guulaystay 99 ka kulan ee uu ilaa hadda soo maamulay halka 15 guuldaro iyo 9 barbaro ah ay waqtigan Los Merengues la soo kulantay.
Heerka guulaysiga Zinedine Zidane ee boqolayda ayaa ah in boqolkiiba 72.4% uu Real Madrid la soo guulaystay kulamadii tartamada oo dhan ee uu soo maamulay, waana heer guulaysigii ugu fiicnaa ee tababarayaashii Real Madrid soo maray kulamadii uu ilaa hadda soo shaqeeyay.
Haddii aan eegno koobka uu Zinedine Zidane taariikhda ka dhigay ee Champions League waxa uu soo maamulay 30 waxayna kooxdiisu soo guulaysatay 20 ka mid ah halka 6 barbaro ah iyo 4 guuldaro ay sidoo kale Los Blancos la soo kulantay intii uu Zidane maamulayay waana waqti ay laba koob oo UCL ah ku soo guulaysatay.
Heerka guulaysiga Zinedine Zidane ee kulamadii UEFA Champions League halka muddadii uu Zidane gacanta ku hayay Madrid ay soo heshay 6 guulood, 4 barbaro ah iyo 2 guuldaro oo Copa Del Rey taas oo la micno ah in boqolkiiba 50 uu soo guulaystay kulamadii uu Madrid kula soo shaqeeyay isku darka Champions League iyo Copa Del Rey.
Zidane ayaa waxyar ka horeeya Jose Mourinho kaas oo heerka guulaysiga kulamadii uu Madrid ka soo shaqeeyay ay ahaayeen boqolkiiba 71.9% halka Zidane uu haysto boqolkiiba 72.4% laakiin ma jiro tababare kale oo Madrid soo maray oo ilaa hadda Zidane heerka guulihiisa gaadhay.
Tababarihii ugu waqtiga dheeraa Real Madrid ee Miguel Munoz ayaa kaalinta saddexaad ku jira kaasoo boolkiiba 59.1% la soo guulaystay Madrid kadib markii uu 356 kulan ka soo guulaystay 602 kulan oo uu kooxda cad cadka soo maamulayay.
Halka Vicente del Bosque uu Madrid ka soo helay boqolkiiba 54.5 % kulamadii uu Real Madrid soo maamulayay waxayna tani ka dhigan tahay in Zidane uu ku socdo heer guulaysi ka fiican tababarayaashii magaca waynaa ee uu Bernabeu soo qabtay.
Si kastaba ha ahaatee, La Rosaleda oo ahayd goobtii uu Zidane waqti sanad ka yar uu ugu soo guulaystay koobkiisii La Liga ee ugu horeeyay muddadii uu Madrid joogay ayuu markale ku soo dhigay rekoodhkan fiican isaga oo gaadhay guushiisii 100 aad ee tartamada oo dhan ee waayihiisa tababaranimo ee Madrid.
zidane wa tabare cajiiba lkn iska hubi guuldaradu waa 9 kaliya barbaraha15 tegera uegtahye